Fitaovana masinina, fitaovana vita amin'ny fingotra, akora vita amin'ny faritra vita amin'ny vy - Mpamatsy orinasa mpanafika
Mpamatsy orinasa mpanafika
Fampidirana fampiasa amin'ny fitaovana fanaovana fitiliana mahazatra
1. Masinina milentika: famongorana ny fingotra 2. boaty fitiliana efa antitra: Azo ampiasaina amin'ny fitsapana mafana amin'ny rivotra antitra amin'ny vokatra vita amin'ny vy sy plastika, ny fitrand...
Rafitra milina fanampiana ho an'ny mpangaro-trano anatiny mahay manentana
Ny tabilaon'ny rafi-pitaovana fitaovam-piadiana mpanamory momba ny fiarovana miaro ny tontolo iainana (firafitry ny trano misy rihana telo) Ny tabilaon'ny rafitry ny milina mpanampy ho an'ny mpanga...
Inona no tsy mampitovy ny kneader sy ny mixer anatiny?
Ny kneaders sy ny mpangaro dia mifanaraka amin'ny filana famokarana ankehitriny, fa tsy mitovy ny fampiasana azy ary samy manana ny filany manokana. Ireto avy ny fahasamihafana manokana. Ny fahasamih...
Ahoana ny fanasokajiana ny fametahana kofehy
Ny kneader dia ampiasaina amin'ny plastika sy ny fametahana vita amin'ny vy sy plastika. Izy koa dia ilaina amin'ny fampifangaroana sy ny fiasa amin'ny vava maloto. Fanasokajiana ny Kneader: Raha ny ...
Masinina mpanampy amin'ny mixer mifono vy
Ny masinina mpanampy amin'ny mpanefy goto dia manome amina baomba isan-karazany ho an'ny fangaro anatiny sy ny fitaovana fanampiny ho an'ny fampitaovana, handanjana ary hanomezana sakafo ireo akora. ...
Copyright © 2019-2020 Rubber Factory Supplier Ltd. Zo rehetra voatokana
Fitaovana masinina, fitaovana vita amin'ny fingotra, akora vita amin'ny faritra vita amin'ny vy